Jaaliyaadka deegaanka oo ku soo qulqulaya Addis Ababa, garabka nabadda qaatay ee ONLF |
Hoteellada waaweyn ee magaalada Addis Ababa ayaad ku arkeysaa jaaliyaadka oo raxan-raxan u fadhiya, islamarkaana ka sheekeysanaya horumarka ay Itoobiya gaadhay muddadii ay dalka ka maqnaayeen, taasoo ay marqaati ka tahay bilicda dhismayaasha casriga ah ee magaalada Addis Ababa.
Jaaliyaadkan ayaa lagu martiqaaday inay goobjoog ka noqdaan shirarka iyo hashiisyada dhexmaraya dowladda iyo garabka nabadda qaatay ee ONLF.
Masuuliyiinta garabkan, oo uu hogaaminayo gudoomiyaha ONLF, Eng. Salaxudiin Cabdiraxman Xaaji Macow, ayaa dhawaan gaadhay magaalada Jigjiga, halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweyeen masuuliyiinta xukumadda dowlad deegaanka Soomaalida, oo ay horkacayeen madaxweyne deegaanka, mudane Cabdi Maxamuud Cumar, iyo gudoomiyaha xisbiga ESPDP, mudane Cabdifitaax Sheekh Cabdullahi.
Waftiga Eng. Macow ayaa aad ula dhacay sida qiimaha iyo qaayaha badneyd ee loogu soo dhaweeyey magaalada Jigjiga, waxeyna xubnaha waftigan tilmaameen inay tani ku noqotay mid aanan la sharxi karin.
Jaaliyaadka deegaanka ee aduunka dacalladiisa ayaa si weyn u soo dhaweeyey hashiiska uu qaatay garabka ONLF ee uu hogaamiyo Eng. Macow, waxeyna aaminsanyihiin inuu hashiiskan door weyn ka cayaari doono xasiloonida deegaanka Soomaalida.
Dhawaan ayey dowladda hashiis kan oo kale ah la gashay ururka UWSLF. Jaaliyaadka deegaanka ayaa sidan oo kale si weyn u soo dhaweeyey hashiiskaa, kuna micneeyey “tallaabo geesinimo leh.”
Jaaliyaadka deegaanka ayaa aaminsan in hantida ku baxda arrimaha amaanka loo adeegsan karo mashaariic wax-weyn ka badali karta nolosha shacabka deegaanka Soomaalida, haddii laga wada shaqeeyo ka-miro-dhalinta olalaha nabadda ee socda.
Dowladda deegaanka Soomaalida ayaa dhawaan ugu baaqday jaaliyaadka inay doorkooda ka cayaaraan nabadda iyo horumarka deegaanka, wuxuuna madaxweynaha deegaanka ballan qaaday inuu xidhiidh adag oo dhaw la sameyn doono qurbajoogta deegaanka.
Sidoo kale, gudoomiyaha xisbiga haya talada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dhankiisa si weyn ugu adkeeyey jaaliyaadka inay deegaankooda maalgashtaan, gacanna ka geystaan horumarka deegaanka ka soconaya.
Jaaliyaadka ayaa aad u soo dhaweeyey fariimaha ka soo baxaya masuuliyiinta ugu sareysa dowlad deegaanka Soomaalida, waxeyna muujiyeen sida ay diyaarka ugu yihiin inay maskax, maal iyo muruqba uga qeyb-qaataan dadaallada ay wado dowladda, si horumarka deegaanka loo gaadhsiiyo dhamaan gobollada uu ka kooban yahay deegaanka.
Jaaliyaadka ku soo qulqulaya magaalada Addis Ababa ayaa lagu wadaa inay maalmahan u sii gudbaan magaalada Jigjiga, waxeyna in badan oo kamid ah uu safarkan u noqonayaa kooddii ugu horeeyey ee ay ku booqdaan dalkooda hooyo, muddo dheer kadib.
Xafiska Wararka Shabakada Wararka ee nogob news adisababa shiinee